बंगलादेशी विमान दुर्घटनाको अर्को पाटो: 'रनवे हेडिङ' ०२ वा २०? | Jukson
त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा सोमबार भएको युएस–बंगला एयरलाइन्सको विमान दुर्घटनाको एउटा कारण 'रनवे हेडिङ' संकेत नम्बर भएको विज्ञले औंल्याएका छन्।
नेपाल प्रहरीका डिआईजी डाक्टर राजिव सुब्बाले एयर ट्राफिक कन्ट्रोल (एटिसी) रेडियोले रनवे संकेत गर्दा पाइलट दुविधामा परेको औंल्याएका हुन्।
उनी नेपाल प्रहरीका सञ्चार विज्ञ मानिन्छन्।
त्रिभुवन अन्तरार्ष्ट्रिय विमानस्थल रनवेका दुई वटा 'रनवे हेडिङ' छन्। र, दुवै हेडिङबाट विमान उडान र अवतरण हुन्छन्। विमानस्थलले हेडिङ संकेतका लागि उत्तर र दक्षिण छुट्याउन २० र ०२ प्रयोग गर्छ। हेडिङ ०२ रनवे दक्षिणतर्फ हो जुन कोटेश्वरतर्फ पर्छ। २० हेडिङबाट विमान अवतरण गर्नका लागि उत्तरतर्फ पशुपति क्षेत्रतर्फबाट आउनुपर्ने हुन्छ। ०२ हेडिङबाट अवतरण गर्दा ललितपुरतिरबाट उपत्यका छिरेको विमान कतै नघुमी सोझै विमानस्थलमा प्रवेश गर्न सक्छ।
डा. सुब्बाले सामाजिक सञ्जालमा विमानस्थलको हेडिङ दिशा ०२ र २० बनाउँदा विमान चालक दुविधामा परेको औंल्याएका हुन्।
‘प्रहरीबाट टिआईएले सिकोस्, प्रहरीको परेड काशन दायाँ र बायाँ भनिँदैन, सम्भावित दुर्घटनाबाट जोगिन दाहिने र बायाँ भनिन्छ। टिआईएको एटिसीले प्रयोग गरेको हेडिङ रनवे ०२ र रन वे २० सञ्चार व्यवस्थापनका हिसाबले दुविधा बढाउने र गलत छन्’, डा. सुब्बाले सामाजिक सञ्जालमा लेखेका हुन्।
अमेरिकामा रहेका सुब्बाले नेपालखबरसँग कुराकानी गर्दै प्रभावकारी सञ्चारका लागि रेडियल नटिकल माइल्सलाईभन्दा सञ्चार कोड प्रयोग गर्नु उपयुक्त हुने बताए। एटिसीले उस्तै उस्तै संकेत प्रयोग गर्दा समेत चालकमा दुविधा भएको उनले सुनाए।
युएस–बंगला एयरलाइन्सका चालक दल सदस्य र एयर ट्राफिक कन्ट्रोलबीच भएको कुराकानीमा समेत रनवे हेडिङ ०२ (जिरो टु) र २० (टु जिरो) का विषयमा कन्फियुज भएको संवाद सार्वजनिक भएको छ।
दुर्घटनाग्रस्त जहाजको सञ्चालक कम्पनी युएस बंगलाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत इमरान असिफले एटिसीले गलत निर्देशन दिँदा जहाज दुर्घटना भएको दाबी गर्दै आएका छन्।
क्याप्टेन अबिद सुल्तान नेपाल उडानमा अनुभवी पाइलट रहेको एयरलाइन्सले जनाएको छ। को पाइलट पृथुला रसिद पहिलो पटक उडान गरेर नेपाल अउँदै थिइन्। उनीहरू दुवैको मृत्यु भएको छ।
म्याग्दी - कालीगण्डकीमा जिप खस्यो, चालकको मृत्यु
सुष्मिता सेनको एक्स बोईफ़्रेण्ड संग सोनाक्षी डेटमा : सेतो कपडामा के दिए उपहार ?
कहाँ पुग्यो लोडसेडिङ हटाउने प्रधानमन्त्रीको योजना ?